Jeevan Mantra Archives - Triveni Online
Home / Jeevan Mantra
2 weeks ago	Jeevan Mantra 0
सेक्स बढी आनन्ददायी कुन उमेरमा होला ? यसबारे एक अध्ययनले नयाँ कुरा पत्ता लगाएको छ । अनलाइन मार्फत एक यौन खेलौना उत्पादक कम्पनीले गरेको अध्ययनले महिलाहरुले २८ वर्षको उमेरमा गरिने सेक्सबाट बढी आनन्द उठाउँने तथ्य फेला पारेको छ । तर पुरुषको हकमा भने सेक्समा सबैभन्दा धेरै मज्जा लिने उमेर ३३ …
विहान सवेरै उठ्नु राम्रो भन्ने हाम्रो पुरानो संस्कार पछिल्लो समयमा वेवास्ता हुन थालेको छ । मानिसहरु ढिलो सम्म जागै बस्ने र विहान ढिला सम्म सुत्ने चलन बढि देखिन्छ । तर खासमा सूर्योदय हुनु अघि नै उठ्नु स्वास्थ्यका दृष्टिले निक्कै राम्रो मानिन्छ । सूर्योदय अघिको समयलाई ब्रह्म मुहूर्त भनिन्छ। यो पुरानो …
निन्द्रा नलाग्ने समस्या छ ? मिठो निन्द्राका लागी यसो गर्नुहोस्
आजभोलीको जीवनशली ,खानपान आदी विभिन्न कारणले मानिसमा तनाव अनिन्द्रा आदि समस्या हरु देखा परिरहेका छन् । पर्याप्त निन्द्रा नपर्नाले थुप्रै रोगहरुको सिकार बन्नु परिरहेको हुन्छ । मिठो निन्द्रको लागी के गर्ने त ? हामिले विभिन्न अनुशन्धान बाट बाहिर आएका तथ्यहरुलाई संकलन गरेर पस्किएकाछौ । निन्द्रा लाग्दैन ? यसो गर्नुहोस् – …
कमाएको पैसा बचाउन सक्नुभएन ? जान्नुहोस् बचत गर्ने यी मन्त्रहरु
कुनैपनि व्यक्ति कमाएर होइन, बचत गरेर धनी हुन्छ । किनभने जति कमायो उति खर्च गर्ने मानिस कहिल्यै पनि धनी हुन सक्दैन । तर, आफ्नो कमाईबाट बचत गर्दै थप लगानी गर्दै अघि बढ्ने मान्छे अवश्य धनी हुन्छ । धनी बन्न त्यति सजिलो छैन । मान्छे न कमाएर मात्रै धनी हुन्छ, न …
यी ४ कुराले थाहा हुन्छ ,तपाईको प्रेम साँचो हो की झुटो भनेर ,चेक गर्नुस्
3 weeks ago	Jeevan Mantra, JyotishMantra 0
काठमाडौ । अहिलेको सूचना र प्रविधीको युगमा यो लभ भन्ने विज्ञान निकै फस्टाएको छ । किनभने अहिले बाबा आमा र आफन्तहरु गर्ने माया त छर्दै छ । तर यहा एक प्रेमी र प्रेमिकाले गर्ने माया कुरा गर्न लागिरहका छौ । जहा भनिन्छ , मायामा , जातभात ,सानोठुलो हेरिदैन् । यदि …
ग्याँस दुघर्टनाबाट बच्न अपनाउनुहोस् ९ सावधानी
चन्द्र थापा महासचिव ग्यास विक्रेता महासंघ सहरी क्षेत्रमा खाना पकाउनका लागि ग्यास अनिवार्य बनिसकेको छ । पछिल्लो समय त गाउँगाउँमा समेत ग्यास लिएर राख्ने प्रचलन बढ्दो छ । तर, सही ढंगले ग्यासको प्रयोग नगर्दा यसले ठूलो दुर्घटना पनि निम्त्याउन सक्छ । बुधबार मात्र पनि वीरगन्जको सुपर ग्यास उद्योगमा ठूलो आगलागी …
जान्नुहोस : कुन महिनामा जन्मिएका महिलाको चरित्र कस्तो हुन्छ ?
4 weeks ago	Jeevan Mantra 0
सुन्दरताको लागि होस् अथवा शिल स्वभाबका आधारमा होस् पुरुष भन्दा बढी महिलाको बारेमा मुल्यांकन गरिने प्रचलन छ । बिशेष गरि महिलाको स्वभाव र सरलपनले सबैलाई आकर्षित गर्ने गर्दछ महिलाहरु आफ्नै परिवेश अनुसारको सिको गर्ने पनि गर्दछन तर उनीहरुको स्वभाव जन्मेको महिना अनुसार पनि निर्धारण हुने ज्योतिषीय तथ्य पनि फेला परेको …
ज्योतिषशास्त्रका अनुसार -यस्तो योगले बनाउँछ मान्छेलाई धनी
हरेक व्यक्ति धनवान र समृद्द हुन चाहन्छ तर भाग्यले जसलाई साथ दिन्छ उही मात्र धनी बन्छ। ज्योतिषशास्त्रमा यस्तो योगलाई यसरी बताइएको छ। यस्तो योग कुनै पनि व्यक्तिको कुण्डलीमा भएमा एक न एक दिन भाग्य चम्केर व्यक्ति धनवान बन्न सक्छ। तपाईको जन्म कुण्डलीमा पनि यस्तै योग छ कि ? ज्योतिषशास्त्रका अनुसार …